DEG DEG: Qarax Goordhow ka dhacay Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay
MUQDISHO, Somalia - Qarax culus ayaa goordhaw ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho, ee caasimadda dalka Somalia.
Qaraxan oo jugtiisa laga maqlay qeybo kamida ah magaaladda ayaa waxa uu ka dhacay iridda Premier bank oo ku yaalla Isgoyska Taleex, halkaasi oo ciidamada booliska Somalia ku leeyihiin bar-koontarool oo lagu baaro gaadiidka.
Goobjooge la hadlay Warsidaha Garowe Online ayaa sheegay inaysan jirin wax khasaaro ah oo qaraxa uu sababay, marka laga tago inay gubteen dhowr gaari oo horyaallay Bangiga.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa mid lagu soo xiray Gaari nooca Qooqanta ama Hilux iyadoo uu u muuqday in lala damacsanaa in lagu khaarijiyo qofkii watey, oo aanan weli la ogeyn waxa uu yahay.
Ma jirto wax war ah oo kasoo baxay laamaha amniga dowladda Somalia oo ku saabsan qaraxa, oo kusoo beegmaya xilli magaalada ay kusoo kordhayaan qaraxyada dadka baabuurta loogu xiro.
Al-Shabaab oo laga saarey Muqdisho 2011 ayaa weeraro iyo dilal qorsheysan oo joogto noqday ka fulinaysa magaaladda, iyadoo beegsata Askarta, Xildhibaanada, Saraakiisha hay'adaha dowladda iyo dadka kale ee bulshada ka dhex muuqda.
Garoonka Muqdisho oo lagu qabtey Ajnabi wata Boorsooyin laga shakiyay
Soomaliya 20.01.2019. 22:04
Xaaladda Garoonka ayaa gashay jawi kale, markii loo yeeray ciidanka miino baarista.
Wararkii ugu danbeeyay xaalada Xildhibaan Qarax lagu dhaawacay
Soomaliya 16.09.2018. 10:18